मुग्लिन–नारायणगढ सडक भाँसियो, सवारी आवागमन एकतर्फी - Sudur Khabar
मुग्लिन–नारायणगढ सडक भाँसियो, सवारी आवागमन एकतर्फी
प्रकाशित मिति : २७ असार २०७५, बुधबार ११:०३
चितवन, असार २७ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको गाईघाट नजिक अकस्मात सडक भासिएपछि आवागमन एकतर्फी भएको छ । सडक भासिने क्रम बढ्दै गएपछि भासिनाको कारण खोजी गर्न विज्ञ समूह झिकाईएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालले मंगलबार बिहान सामान्य भासिएको देखिएकोमा क्रमशः बढ्दै गएर एक फिटजति भासिएको बताउनुभयो । भासिने क्रम बढ्दै गएपछि मंगलबारबाटै सडक एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सो स्थान नारायणगढबाट १७ किलोमिटर मुग्लिनतर्फ पर्दछ । सडकको ३० मिटर लम्बाइ र छेउबाट सात मिटर चौडा भाग भासिएको हो ।
सो ठाउँमा नौ मिटर कालोपत्रे गरिएको छ । कालोपत्रेको त्रिशूली नदीतर्फ थप दुई मिटर खुल्ला भाग रहेको छ । कालोपत्रे गरिएको आधा भागसम्म भासिएको खनालले बताउनुभयो । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका परामर्शदाता कम्पनीका सहायक आवासीय इञ्जिनियर ज्ञानेन्द्र घिमिरेका अनुसार भासिने क्रम बढेमा तत्काल भित्तो काटेर सडक विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले तलबाट नदीले खोलेर भासिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
आज विज्ञहरुको समूह आउने र के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने घिमिरेले बताउनुभयो । नजिकको भित्तो होचो भएकाले विस्तार गर्न सहज हुने घिमिरेको भनाइ छ । एकलेन थप्न करीब पाँच मिटर उचाइबाट भित्तो काट्नु पर्ने बताइएको छ ।
अकस्मात् सडक रोकिन सक्ने भन्दै सडक नियमित बनाउने गृहकार्य शुरु गरिएको छ । सोही ठाउँमा २०६० सालमा रक स्वायल एङकरिङ गरिएको थियो । तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले सोही क्षेत्रमा त्यतिबेला सडक भासिएर रक स्वायल एङ्करिङ गरिएको बताउनुभयो ।
भित्तोमा ड्रिल गरी १०÷१५ मिटर रड घुसाएर रडसँगै सिमेन्ट जमाउने र बाहिरी भाग पनि ढलान गरी बलियो बनाउने कामलाई रक स्वायल एङकरिङ भनिन्छ । सोही ठाउँको रक एङकरिङले काम गर्न छोडेर धसिएको पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । हाल सो सडक विस्तारको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोही सडक हुँदै दैनिक १० हजार हाराहारी सवारीसाधन आवातजावत गर्दछन् ।
चन्द्रागिरी पुगेर ‘कवि’ बने प्रधानमन्त्री ओली, लेखे कविता
के तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ ? यदि हो भने सिधै मन्त्रालयमा फोन गर्नुहोस सरकारले जागिर दिन्छ
सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्दै, बालियो रातो बत्ती
अर्घाखाँची : आफ्नै भाइ बुहारीलाई जेठाजुले गरे हँसिया प्रहार
कर्मचारीको उमेर हद ६० बनाउन उच्च पदस्थकै चलखेल
यस्तो बन्दै संघीय प्रहरीको संरचना
अछाममा कार्यरत ५ सय बढी स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् ८ महिनादेखि तलब
बझाङ प्रहरीको १०० नं मा यौनका कुरा, प्रहरी जवानलाई युवतीले भनिन्–‘आइलब यु डार्लिङ ’
यस्ता छन् चीनसँगको सम्झौता—समझदारी
आईतबारको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुका साथै शुख,शान्ति,संबृद्धी प्राप्त हुने
शनिवारको दिन यस्ता ४ वस्तु नकिन्नुहोस्, अशुभ मानिन्छ !!
शनिवारको दिन यस्ता क्रियाकलाप गरेमा शुख,शान्तिका साथै आटेको पुरा गर्न सकिने …
के एक मुखे रुद्राक्षको दर्शन गर्दैमा मनोकामना पुरा हुन्छ त ? यस्तो छ धार्मिक भनाई एव् विश्वास
स्त्री जातिहरुले पढ्नै पर्ने जानकारी मूलक टिप्स: यसपलाीको साउन महिनामा १६२ वर्ष पछि पर्यो यस्तो निकै दुर्लभ संयोग, के गरी वर्त बस्ने हेर्नुहोस सम्पुर्ण बिधीहरु
जिल्ला संवाददाताहरु : झलक पाली (डोटी), विनोदसिंह विष्ट (बैतडी), नमराज भण्डारी (अछाम), लोकेन्द्रप्रसाद जोशी (दार्चुला), डीबी विष्ट (बझाङ), राजेन्द्र पनेरु (कञ्चनपुर), धुर्व ओझा (अत्तरिया), निराजन परियार (धनगढी)